ITS Tech School Consulting - ITS Tech School Nyocha - ITS Tech School
Ndị ọkachamara na-ahụ maka ọrụ ọkachamara nwere ike ịbụ ihe ngwọta maka nsogbu nke enweghi ọmịiko zuru oke na njirimara iji jide ọnyà cyber ndị ọhụrụ, egwu, na adịghị ike. Anyị nwere ike ịnapụta ụdị dịgasị iche iche nke ike - site na ntinye ule na usoro iwu na ụkpụrụ nhazi, na nkwụsị.
ERP na-agba izu
Ị dị njikere iji nweta Nche & ERP Consulting Services?
Ndị ọkachamara anyị nọ ebe a iji nyere aka!
Anyị nyochaa egwu na mwakpo, jikwaa ndekọ, akụkọ akụkọ & nyochaa, jikwaa nchedo akụ na ngwanrọ njikwa dịka ọrụ.
Ihe ize ndụ na nnweta, nchọpụta gbasara nnyocha, nchọpụta GDPR na nyocha, ntinye ule na ụkpụrụ omume ha, ghọta usoro ma nyere aka imezu ya n'ụzọ dị mma.
Ghọta na teknụzụ akwadoro, ihe ọ pụtara ma jikọta na usoro ọhụrụ na ngwanrọ. Anyị ghọtara, me atụmatụ, kee, itinye ọnụ, mejuputa ma wepụ
Mmezi, ịjụ ajụjụ, mwekota na mgbe e mesịrị Njupụta nchịkwa nke ị nwere ike ijikwa usoro nke gị onwe gị na nkwado kachasị site n'aka ndị isi obodo.